के सिलिकॉन भान्सा उपकरण अलग बनाउँछ? | जिing्गकी
सिलिकॉन भान्छा उपकरण र खाना पकाउने भाँडामा सुविधाहरू हुन्छन् जसले उनीहरूको धातु, प्लास्टिक, रबर वा काठका समकक्षहरूमा केही फाइदाहरू प्रदान गर्दछन्। धेरै जसो सिलिकॉन उत्पादनहरू चहकिलो रंगमा आउँदछन्। त्यस बाहेक, हामी उनीहरूका अन्य सुविधाहरू विचार गर्दछौं र हेर्छौं कि सिलिकॉन भान्साका भाँडाहरू प्रयोग गर्न लायक छन् कि छैनन्।
सिलिकॉन खाना पकाउने भाँडामा उच्च-तातो प्रतिरोध छ। यसले धेरै तातो ताप सहन सक्छ (केही उत्पादकहरूले heat०० डिग्री फरेनहाइटसम्मको ताप प्रतिरोधको दावी गर्छन्)। यदि तपाईं खाना पकाउनेमा सिलिकॉन टर्नरहरू वा हिसकहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले चिन्ता लिनु पर्दैन कि जब यो दुर्घटनावश केही समयको लागि भाँडोमा छोड्नुभयो भने यो पग्लिनेछ। मलाई नन्-स्टिक टर्नरहरू प्रयोग गर्ने सम्झना छ र यो पग्लिन्छ जब तपाईं यसलाई एकदम तातो तेलमा डुबाउनुहुन्छ। त्यहाँ सिलिकॉन पोथोल्डर्स पनि छन् जुन एकदम तातो तन्दोबाट डिश निकाल्नको लागि उपयुक्त छ।
सिलिकॉन खाना पकाउने भाँडा दाग-प्रतिरोधी हुन्। यो सिलिकॉनको गैर-झरझोर विशेषता को कारण हो। ताकि यसले गन्ध वा र retain्गहरू समाहित गर्दैन जब तपाईं यसलाई टमाटरमा आधारित खाद्य उत्पादनहरू जस्तै गहिरो रंगको खाना उत्तेजनाको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। के तपाईंले आफ्नो रबर स्प्याटुलामा स्प्यागेटी सस दाग हटाउन कत्ति गाह्रो महसुस गर्नुभयो? यसले सिलिकन उत्पादनहरू सजीलो सफा गर्न वा धुलाई पनि उधारो दिन्छ। काठको चम्चाको तुलनामा, जो झरझराउँछ र माइक्रोबियल वृद्धिलाई बन्दरगाहमा पार्न सक्छ, सिलिकॉन भाँडाहरू यस्तो विकासलाई समर्थन गर्दैन जसले यसलाई खानासँग सम्पर्कको लागि सुरक्षित बनाउँछ।
सिलिकॉन खाना पकाउने भाँडा रबर जस्तै छन्। यसले उनीहरूलाई धेरै उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाउँदछ जब गैर स्टिक सतहहरूसँग व्यवहार गर्ने। यो स्क्र्याच गर्न वा क्षति गर्न सक्नुहुन्न गैर स्टिक कुकिंग भाँडाहरू र प्यानहरू जसरी काठ वा धातुको चम्मच गर्दछ। यस लचिलोपनले यसलाई रब्रा स्प्याटुलालाई स्क्र्यापिंगको रूपमा उपयोगी बनाउँदछ जुन मिक्सनको कचौरामा ती केक ब्याटर सफा गर्दछ।
सिलिकॉन खाना पकाउने भाँडा गैर-संक्षारक र कडा पहिरिएका हुन्। खाना श्रेणी ग्रेड सिलिकॉन कुनै पनि प्रकारको खानामा प्रयोग गर्न धेरै सुरक्षित छ। यसले खाना वा पेय पदार्थसँग प्रतिक्रिया गर्दैन वा कुनै खतरनाक धुँवा उत्पादन गर्दैन। केही धातुहरूको विपरित जुन खानामा केहि एसिडको संपर्कमा खस्याउन सक्छ। यसले तापक्रमको चरम जग्गामा नकरात्मक प्रतिक्रिया प्रदान गर्दैन। यसको मतलव यो अन्य भान्साका भाँडाहरू भन्दा लामो समय सम्म रहनेछ।